ओली र प्रचण्डको राजनीति पाँच वर्षमा ज्योति बसुको तहमा अवसान हुन्छ - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
- गोपाल किराती
खोटाङ जिल्ला पेम्मा गाउँमा बस्ने श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक हरिनारायण राईबाट मलाई माक्र्सवादी विचारप्रति पहिलो प्रेरणा प्राप्त भयो । सोलुखुम्बु जिल्ला सोताङलुङमा जन्मेँ र हुर्के । २०३७ सालमा जेठा दाजु प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ झापामा आन्दोलनको बीचमा घाइते हुनभएछ, २०३७ सालमा जेठा दाजु बित्नुभयो । २०३८ सालमा बुबा र आमा २०३९ सालमा बित्नुभएपछि टुहुरा भइयो । हामी एकातिर धेरै गरिब थियौँ, त्यसमाथि गाउँका प्रधानपञ्च बुबा बितिसकेपछि हाम्रा जग्गाबारी खोस्ने काम ग¥यो । पीडित अवस्थामा २०३९ सालमा म काठमाडौँ आएँ । ट्रेकिङ मजदुरीमा लागेँ । सोलुखुम्बुका धेरै मानिस ट्रेकिङ मजदुरीमा थिए । त्यही क्रममा हरिनारायण मेरो भिनाजुको संरक्षणमा बस्थे । दिदीको जोड थियो कि ब्रिटिस गोर्खा भर्तीमा पठाउने के गरी गरिखाने भाइलाई बनाउने अन्तर्गत र भिनाजु नेकपा चौममा नजिकको बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो । त्यहीबीचमा गोर्खा भर्तीमा जान हुँदैन, देश र जनताका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ । २०४० मंसिरमा भिनाजुले प्रेरित गर्नुभयो । त्यो बेला सिम्मा गीति–नाटक धेरै चर्चित नाटक रहेछ । रायनले लेख्नुभएको त्यो गोर्खा भर्तीको तुफान कथा अथवा दर्दनाक कथामा आधारित नाटक रहेछ । भिनाजुको प्रभावबाट देश र जनताका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध भएँ । त्यहाँदेखि लाग्दै आउने क्रममा जातीय प्रश्नमा २०४३/४४ सालतिर मलाई जानकरी भयो । २०४५ सालमा राजकाज मुद्दामा १० महिना जेल बसे, यद्यपि भिनाजु त्यो गाउँको निमाविलाई मावि बनाएपछि उहाँ हेडमास्टर भएर जानुभयो । मलाई संगठित गर्नुभएन । संगठन खोज्नाले मलाई निकै हैरान भयो । स्वतन्त्र वामपन्थी कार्यकर्ता रहँदै आएँ । २०४५/०४६ सालमा जेल बस्दा चिन्तन–मनन गर्दादेखि यो वर्गीय र जातीय प्रश्न दुबै चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ र बाहिर आएँ ।
माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हाम्रो पथप्रदर्शक सिद्धान्त होे । कार्यदिशाको सम्बन्धमा बादलहरूसँग एकता गर्दा अध्ययन–अनुसन्धानद्वारा नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । त्यहाँ पुँजीवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिको तयारी भन्नेसम्म लेखिएको थियो । त्यसमाथि पनि मेरो प्रश्न थियो । एकतापछि कार्यदिशा क्रान्तिकारी दिशा तयार गर्नुपर्नेमा उहाँहरू भाग्नुभयो । अर्को यो पहिचानको मुद्दा नेपाली क्रान्तिको यो एक अभिन्न कार्यभार हो । वर्गप्रधान हुन्छ, माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा त्यो एकदम सही हो तर त्यसको अतिरिक्त देशमा समाजमा रहेका सबैखाले अन्याय, उत्पीडनको विरुद्ध लड्नु माक्र्सवादीहरूको कर्तव्य हुन्छ । त्यसअन्तर्गत नेपाली समाजमा ४ किसिमका उत्पीडनहरू विद्यमान छन् । जनयुद्धअघि नेकपा माओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्धारण गरेको नेपाली राजनीतिको अन्तर्विरोध एकदम सही छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडन छ, त्यसको अन्त्य गर्न जनयुद्ध भनियो । त्यसको अन्त्य गर्न माओवाद भनियो र त्यसको अन्त्य गर्न माओवाद स्वीकार गर्ने पार्टी भनियो । अहिले उहाँहरूले छोड्नुभएपछि संसदवादमा उहाँहरूले हामफालेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ । भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुले क्रान्तिकारी चारु मजुमदारहरूको रगत पिएर २०/२५ वर्ष जो मुख्यमन्त्री माक्र्सवादको नामबाट चलाएका थिए तर अहिले त्यहाँ माक्र्सवादी भनिनेहरूको बीउसमेत मासिएको छ । ओली–प्रचण्डको अवस्था पनि यो २०/२५ लाग्दैन । यही ५ वर्षमा उहाँहरू ज्योति बसु हुनुहुनेछ । ओली–प्रचण्डको यो कथित कम्युनिस्ट नामको खोल हो । संसदीय पुँजीवादी राजनीति ४/५ वर्ष ज्योति बसुको तहमा अवसान हुन्छ ।
एकदम ठीक हो । खडक ओली समग्रतामा सम्पूर्ण रूपले कम्युनिस्टको खोल ओढेका प्रतिक्रियावादी मानिस हुन् । उनी २०२८ सालमा झापा विद्रोहमा क्रान्तिकारी भूमिका खेलेका पनि पछि बिग्रँदै आउने क्रममा प्रतिक्रियावादी मानिस हुन् । प्रचण्ड ७ बुँदेपछि वैद्य कमरेडहरू, विप्लव कमरेडहरूले पहिल्यैदेखि प्रचण्ड बेठीक हो, भन्नुभयो । मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई चिन्ने र हामीले चिन्नेमा अन्तर परिहाल्ने भयो । २०६० सालमा मात्रै प्रचण्डसँग मेरो सहकार्य भयो । ढिलै भए पनि प्रचण्ड दक्षिणपन्थी अवसरवादीको रूपमा अहिले ठहरिनुभयो । उहाँ प्रचण्ड नरहेर पुष्पकमल दाहाल हुनुभयो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यो खड्क ओलीको मतियार हुनु पुग्नुभयो । यसो गर्दा विप्लवजी नेतृत्वको नेकपाले फासिवादी आरोपित गरेको छ, त्यो म सही ठान्छु ।
२३ औँ जनयुद्ध दिवस वैद्य र विप्लव पार्टीले आयोजना गर्नुभयो, हामीलाई पनि निम्त्याउनुभयो । एकै ठाउँमा उभिएर हामीले जनयुद्ध दिवस स्मरण ग¥यौँ, चर्चा ग¥यौँ । त्यो दिन हेमन्तप्रकाश ओलीसँगै उभिएर मन्तव्य पनि दियौँ । त्यस्तो पक्रने काम भएन किन भने खडक ओली प्रम भइसकेका थिएनन् । फागुन ६ गते विराटनगरमा युवाको सम्मेलनलाई दमन गर्ने काम भयो । हेमन्तजीहरूलाई गिरफ्तार गरियो । हामीले विरोध जनायौँ । यो खड्क ओली र प्रचण्डको संकट हो भनेर पनि हामीले भन्यौँ । स्वाभाविक रूपमा माओवाद मान्नेहरूको बीचमा एउटा क्रान्तिकारीहरूको खेमा निर्माण गर्नुपर्छ । स्वाभाविक र अनिवार्य रूपमा पार्टीगत एकतामा समय लाग्छ । मोहन वैद्य, विप्लव कमरेडहरूसँग आहुतिजी दस्तावेजको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पढेर मात्र बुझ्न सकिने कुरा भयो । माक्क्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मान्दै नेपाली क्रान्तिको पथप्रदर्शक सिद्धान्त स्वीकार गर्नेहरूका बीचमा पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर न्यूनतम रूपमा कार्यगत एकता र अधिकतम रूपमा तत्काल परिस्थितिको रूपमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ । हामी क्रान्तिकारी खेमा निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विप्लवजीहरू डटेर एउटा पार्टी निर्माण गरेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ । उहाँलाई पनि मानौँ न संविधान भनौँ भनेर मैले सिकाउन लायक हुँदैन, उहाँहरूले पनि यो संविधान मान मान साइँला भनिहाल्यो भने त्यो मान्न सक्ने कुरा भएन । हाम्रोबीचमा सम्बन्धमा ध्रुवीकरण तर कार्यगत एकता संयुक्त मोर्चाको रूपमा हुन्छ ।
अन्तमा, केही भन्नुहुन्छ कि ?
मैले २०५० देखि एउटा कुरा नेपाली इतिहासको विशेषता सम्बन्धमा भन्दै आएको छु, त्यो बेला ‘नेपालमा राज्यक्रान्ति’ शीर्षकमा एउटा सानो पुस्तिका प्रकाशित भएको थियोे । ती हरेक १०÷१० वर्षमा नेपाल राष्ट्रिय घटनाहरू हुने गरेका छन् । क्रान्ति या प्रतिक्रान्तिको रूपमा सन् १९९७ मा ४ जना त्यो बेलाका नेताहरू सहिद हुनुभयो । त्यो नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो घटना थियो । त्यसको १० वर्षपछि २००७ राणा शासन ढल्योे, संसदीय प्रजातन्त्र आयो । त्यसको १० वर्षपछि २०१७ मा त्यो प्रजातन्त्र गयो, राजाको पञ्चायती व्यवस्था आयोे । त्यसको करिब १० वर्षपछि २०२८ मा झापा विद्रोह भयो, त्यसले त्यो बेलाको संसद्वादमा प्रहार ग¥यो । त्यसको १० वर्षपछि २०३६ /०३७ मा विद्यार्थी आन्दोलन निर्दल कि बहुदल भन्ने राष्ट्रिय जनमत–संग्रह भयो । त्यसको १० वर्षपछि २०४६ मा निर्दलीय व्यवस्था गएर संसदीय बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०५२ मा नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध उद्घोष ग¥यो । २०५२ सालले नेपाली राजनीति इतिहासलाई मोड दिएपछि २०५६/०५७ हुनुपर्नेथ्यो, यद्यपि २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो तर १९९७ को निरन्तरताको उपज मात्र थिएन, त्यो २०५२ सालको उपज थियो । मुख्य त २०५२ सालको १० वर्षपछि २०६२/०६३ मा ठूलो जनआन्दोलन भयो ।
नेपाली जनताको राष्ट्रियता, जनावाद, जनजीविका, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा भएको छैन । यी संसद्वादीहरूले पूरा गर्ने कुरै भएन । त्यस अर्थमा हामीले सडकबाट विभिन्न क्षेत्रबाट निर्णायक संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ । अन्तमा, कमरेड मोहन वैद्य, कमरेड विप्लवसँग नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन अभियानको तर्फबाट अपील गर्न चाहन्छु कि हामी विभाजित भयौँ, त्यसपछि हेटौँडा एमाओवादीको महाधिवेशन भयो । त्यसले पुँजीवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पूरा भएको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको रणनीतिमा अघि बढ्ने भयौँ । त्यहाँ मेरो केही प्रश्नहरू थियो तर मैले त्यो बेला प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत कार्यदिशालाई समर्थन गरे किनभने जनयुद्ध र संविधानसभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमासन् १९१७ को रुसको फेब्रुअरी क्रान्तिसरह भयो । पुँजीवादी क्रान्ति भयो । अब अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइलाई समर्थन गरे, त्यो सही लाग्छ । अब कमरेड वैद्य, विप्लव पार्टीका कमरेडहरूलाई लाग्न सक्छ कि नेपालमा के भयो ? विप्लव कमरेडहरूले यो संविधान र संसदीय व्यवस्थाको खारेजीको जो नीति लिनुभएको छ, यो विप्लवजीको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा बनाऔँ, माओवाद मान्ने क्रान्तिकारीहरू र पहिचान पक्षधरहरूका बीचमा एउटा संयुक्त बनाऔँ । यो काममा पार लगाउने विप्लवजी नै देखिनुहुन्छ । यो मुद्दा–मामिलामा खारेजीको निम्ति यसलाई भनौँ । खड्क ओलीले एउटा भाषणमा वार्तामा आउनुप¥यो भने, वास्तवमा त्यो दमनको तयारी हो । यो फासिवादी षड्यन्त्र भनेर बुझिहाल्ने कुरा भइहाल्यो । ओली–प्रचण्डका सबै कुरा मान्न सकिन्न । ४/५ वर्ष तयारी गरौँ । संयुक्त मोर्चा निर्माण गरौँ ।